कक्षा ११ मा पुरानै कोर्स पढाउँदै विद्यालय – Merokarnali
कक्षा ११ मा पुरानै कोर्स पढाउँदै विद्यालय
मेरो कर्णाली । २०७७, २१ कार्तिक शुक्रबार मा प्रकाशित
कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाउने कि पुरानोअनुसार भन्नेमा विद्यालय अलमलमा परेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार पढाउन निर्देशन दिएपछि कतिपय विद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार कतिले पुरानै कोर्स पढाइ रहेका छन् ।
सरकार र सर्वोच्च अदालतमध्ये कसको कुरालाई मान्ने भन्नेमा विद्यालय अलमलमा परेका छन् । सर्वोच्चले तत्काल नयाँ कोर्स लागू नगर्न आदेश दिएर सरोकारवाला निकायलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । अन्तिम फैसाला आउन बाँकी रहेकाले विद्यालयहरू नयाँ कोर्स पढाउने कि पुरानो भन्नेमा अलमलमा परेका हुन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीमा नयाँ कोर्स लागू गर्न नहुने र पाठ्यक्रममा गणितलाई कम महत्त्तव दिएको भन्दै मुद्दा अदालतमा पुगेको हो ।
१ असोजदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा ११ को पनि पढाइ सुरु भएको छ । अधिकांश विद्यालयले भने पुरानै कोर्स पढाइ रहेको बताएका छन् । महामारीको समयमा नयाँ कोर्स लागू गर्न नसकिने सबैको एक मत छ ।
‘दसैँअगाडि पुरानै कोर्स पढाएका थियौँ । मन्त्रालयले नयाँ पढाउन भन्यो । फेरि सर्वोच्चको अर्को आदेश आयो,’ बनहार्ट कलेजका व्यवस्थापन कमिटीका अध्यक्ष भुपेस छतकुलीले भने, ‘कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच नै समन्वय छैन । अदालतको आदेश सरकारले मान्ने हो भने नयाँ कोर्स लागू हुँदैन ।’
नयाँ कोर्सअनुसार पढाउने शिक्षक पनि नरहेको उनले बताए । ‘११ मा नयाँ सामाजिक विषय छ । त्यो पढाउने शिक्षक नै छैनन् । १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षा छ यो भनेको के हो थाहा छैन । शिक्षकलाई तालिम छैन । किताब छैन कसरी नयाँ लागू हुनछ ? यो वर्ष पुरानैबाट अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
युनिग्लोब हायर सेकेन्डरी स्कुलका संचालक नरबहादुर विष्टले नयाँ र पुरानो दुवैमा मिल्ने गरि पढाइ रहेको बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयको सूचना आएपछि नयाँ लागू गर्ने तयारी गरेका थियौँ । भर्ना पनि ढिला भएकाले तिहारपछि नयाँ कोर्सअनुसार जाने योजना थियो,’ उनले भने, ‘अहिले नयाँ र पुरानोको बीचको कोर्स पढाइ रहेका छौँ । नयाँ पाठ्यक्रम लागू भए पनि हुने पुरानै भए पनि हुने गरि पढाउँदै छौँ ।’
नेपालय कलेजका प्रिन्सिपल केपी डोटेलले सरकार र सर्वोच्चको आदेशले अन्योल भएकाले यो वर्ष पुरानै कोर्स पढाउनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘नयाँबाट नै पढाएको थियौँ । मेजर विषय तिहारपछि सुरु गर्ने तयारी थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अन्योल भएको छ,’ उनले भने, ‘देशको स्थितिअनुसार यो वर्ष पुरानै कोर्स पढाउनुपर्छ । नयाँ कोर्स अर्को वर्ष लागू गर्दा उपयुक्त हुन्छ । नयाँ कोर्स शिक्षकलाई ट्रेन गरेको छैन,’ उनले भने ।
पिनाकल एकेडेमीका प्रिन्सिपल डा. ऋषि तिवारीले मुख्य विषय मात्र पढाइ रहेको बताए । ‘मेजर विषय पढाएका छौँ । महामारीले विद्यार्थी को हो शिक्षक को हो चिन्ने अवस्था छैन । नयाँ पाठ्यक्रमा विवाद छ,’ उनले भने, ‘नयाँ पाठ्यक्रममा गणित विषय विज्ञानबाट हटाएको छ । यसले भोलि विद्यार्थीलाई समस्या ल्याउँछ । अदालतको आदेशअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
नयाँ पाठ्यक्रमलाई राम्रो बनाएर अर्को वर्ष लागू गर्दा फरक नपर्ने उनको धारणा छ । ‘पाठ्यक्रम पहिलेको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ । माथिमाथि कक्षा जाँदा विषय घट्दै जानुपर्ने हो झन धेरै भयो । पाठ्यक्रम परिवर्तन ४ वर्ष वा ५ वर्षमा परिवर्तन होइन आवश्यकताअनुसार हरेक वर्ष परिवर्तन गर्न सकिन्छ । नयाँ घर बनाउने हो भने पुरानोभन्दा राम्रो बनाउने हो,’ उनले भने ।
लिभरपुल कलेजका संचालकसमेत रहेको सहप्राचार्य नवीन चौहानले नयाँ र पुरानो कोर्समा रहेका विषय पढाइ रहेको बताए । ‘नयाँ र पुरानो कोर्स दुवैमा रहेका विषया पढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पूरानो कोर्स नै पढाउनुको विकल्प छैन ।’
महामारीमा नयाँ कोर्स लागू गर्न कठिन रहेको उनले बताए । ‘नयाँ कोर्सअनुसार पढाउन तयारी पनि पुगेको छैन । कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष सम्भव छैन । अर्को वर्ष लागू गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ (शिलापत्र)